အပျော် သဘောတင်လိုက် တဲ့ ဗီဒိီယိုလေးတစ်ခု ကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ အိချောပို(ရုပ်သံ) – Shwe Likes
အပျော် သဘောတင်လိုက် တဲ့ ဗီဒိီယိုလေးတစ်ခု ကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ အိချောပို(ရုပ်သံ)
အနုပညာ လမ်းကြော င်းတစ်လေ ျှာက်မှာ ချစ်စရာအပြုံေ လးတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့အပြင် အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေကြောင့် ယနေ့ချိ န်ထိတိုင်ေ အာင် ယောက်ျားလေး ပရိသ တ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရ ထားတာ ကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးေ ချာလေး အိ
ချောပိုပဲဖြ စ်ပါတယ်။သူ မကတော့ အနုပညာေ လာကမှာနှစ်အေ တာ်ကြာေ အာင်မြင်မှုေ တွနဲ့ယနေ့ ချိန်ထိတိုင်အော င်ရပ်တ ည်နေတာပါ။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကို ယ်အလှပုံရိ ပ်တွေကလည်း လူမှုကွ န်ရက်တွေမှာ ပျံ့နှံ့ပြီး အားကျေ နရတာပါ။ သူမကတော့ ခုခေတ်အခြေေ နကြောင့်
အနုပညာအ လုပ်တွေကို နားထား ရပေမယ့် လူမှုကွန်ရ က်ကနေ ပုံရိပ်လေးေ တွကိုတင်ပေးေ လ့ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့်လူမှုကွ န်ရက်မှာ Follower အများအြ ပားနဲ့ရပ်တ ည်နေနိုင်တာပါ။ ဒီနေ့လေး မှာတော့ အိချောပိုရဲ့ ရှုတင်မှာ ကလေးလေးတ စ်ယောက်လို ဆော့နေတဲ့ဗီဒီီ
ယိုလေးကို တင်ပေးလာ တာဖြစ်ပါ တယ်နော်.. သူမရဲ့ချစ်စ ရာကောင်းတဲ့ ဆော့ထားတဲ့ဗီဒီ ယိုလေးအောက် မှာတော့ ချစ်ပြီးအားေ ပးစ ကားပြောထားတဲ့ ကောမန့်တွေ လည်း ရှိပေမဲ့ ဒီလိုပြည်သူတွေအ ဆင်မပြေကြ တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်တွေ ကိုတောင် ပြန်လုပ်နေပြီး
ပျော်ပါးနေ တာ လိပ်ပြာလုံရဲ့ လားဆိုတဲ့ ကောမန့်တွေနဲ့ ပြ ည့်နှက်နေပါ တယ်နော်.. ဝေဖန်မှုေ တွ အပြည့်နဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ကြည့်ပြီး . ပရိသတ်ကြီးလည်း အိချော ပိုကို ချ စ်ပေးကြပါအုံးနော်.. Source: Ei Chaw Po
အႏုပညာ လမ္းေၾကာ င္းတစ္ေလ ၽွာက္မွာ ခ်စ္စရာအျပဳံေ လးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တဲ့အျပင္ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ အလွေတြေၾကာင့္ ယေန႔ခ်ိ န္ထိတိုင္ေ အာင္ ေယာက္်ားေလး ပရိသ တ္အားေပးမႈ အခိုင္အမာရ ထားတာ ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေ ခ်ာေလး အိ
ေခ်ာပိုပဲၿဖ စ္ပါတယ္။သူ မကေတာ့ အႏုပညာေ လာကမွာႏွစ္ေအ တာ္ၾကာေ အာင္ျမင္မႈေ တြနဲ႔ယေန႔ ခ်ိန္ထိတိုင္ေအာ င္ရပ္တ ည္ေနတာပါ။ သူမရဲ့ ခႏၶာကို ယ္အလွပုံရိ ပ္ေတြကလည္း လူမႈကြ န္ရက္ေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွံ့ၿပီး အားေက် နရတာပါ။ သူမကေတာ့ ခုေခတ္အေျခေ နေၾကာင့္
အႏုပညာအ လုပ္ေတြကို နားထား ရေပမယ့္ လူမႈကြန္ရ က္ကေန ပုံရိပ္ေလးေ တြကိုတင္ေပးေ လ့ရွိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လူမႈကြ န္ရက္မွာ Follower အမ်ားၾအ ပားနဲ႔ရပ္တ ည္ေနနိုင္တာပါ။ ဒီေန႔ေလး မွာေတာ့ အိေခ်ာပိုရဲ့ ရႈတင္မွာ ကေလးေလးတ စ္ေယာက္လို ေဆာ့ေနတဲ့ဗီဒီီ
ယိုေလးကို တင္ေပးလာ တာျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္.. သူမရဲ့ခ်စ္စ ရာေကာင္းတဲ့ ေဆာ့ထားတဲ့ဗီဒီ ယိုေလးေအာက္ မွာေတာ့ ခ်စ္ၿပီးအားေ ပးစ ကားေျပာထားတဲ့ ေကာမန႔္ေတြ လည္း ရွိေပမဲ့ ဒီလိုျပည္သူေတြအ ဆင္မေျပၾက တဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ေတြ ကိုေတာင္ ျပန္လုပ္ေနၿပီး
ေပ်ာ္ပါးေန တာ လိပ္ျပာလုံရဲ့ လားဆိုတဲ့ ေကာမန႔္ေတြနဲ႔ ၿပ ည့္ႏွက္ေနပါ တယ္ေနာ္.. ေဝဖန္မႈေ တြ အျပည့္နဲ႔ အိေခ်ာပိုရဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို ၾကည့္ၿပီး . ပရိသတ္ႀကီးလည္း အိေခ်ာ ပိုကို ခ် စ္ေပးၾကပါအုံးေနာ္.. Source: Ei Chaw Po
အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေပေမဲ့လည်း ညှို့အားကောင်းတဲ့ မျက်ဝန်းလေးနဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို ပြသလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်